तपाईकाे साप्ताहिक राशीफल [ फागुन २३ गते आइतबारदेखि फागुन २९ गते शनिबारसम्म ] - नेपालबहस
तपाईकाे साप्ताहिक राशीफल [ फागुन २३ गते आइतबारदेखि फागुन २९ गते शनिबारसम्म ]
| ६:२१:१२ मा प्रकाशित
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ):- समय राम्रो रहेकोले लगनशिल तथा ईमान्दारिताले समाजका मान सम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ । प्रेम प्रशङको गाठो कसिलो भएर जानेछ भने नया ठाउँबाट प्रेमप्रस्ताव आउने अधिक सम्भावना रहेकोछ । लामो समय देखि रोकिएर बसेका कामहरु बन्नेछन् भने तपाईको काममा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरु आफै किनारा लाग्नेछन् । पढाईलेखाईमा प्रसस्त समय दिन सकिने हुँदा भनेजस्तो उपलव्धी हासिल गर्न सकिनेछ । धर्म तथा अध्यात्म क्षेत्रमा बिशेष रुची बढ्नेछ । दार्शनिक विषयवस्तुमा मन जाने हुनाले फराकिलो ज्ञान आर्जन गर्न सकिनेछ । व्यापार लगानी गरी मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ भने कृषि,पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग मार्फत मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । दाम्पत्य सुख,प्रेम सम्वन्ध तथा पारिवारिक सम्वन्ध सुमधुर हुनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो):- बुधबारसम्मको समय मध्यम रहेकोले परिवार तथा आफन्त जनसँग मनमुटाव बढ्नेछ भने पतिपत्नी तथा मायाप्रेममा अविस्वास सिर्जना हुनेछ । सवारीसाधन तथा यात्रा गर्दा बिषेश ध्यान दिनुहोला दुर्घटना तथा अप्रिय घटना घट्न सक्छ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन निकै नै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्याले सताउनेछ भने आफन्त तथा विश्वास गरेकैहरुबाट धोका हुनेछ । बिहीबारबाट समय राम्रो रहेकोले तारिफ योग्य काम गरी नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन पाईने हुनाले पद प्राप्तीको योग रहेकोछ । पैत्रिक स्रोतसाधनको प्रयोग मार्फत आम्दानी बढाउन सकिनेछ भने कृषि पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा बढोत्तरिको गतिलो योग रहेको छ । प्रेमील जोडीहरुका लागी समय उत्तम रहेको छ ।
मिथुन ( का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) :- सोमबारसम्मको समय राम्रो रहेकोले पर्यटकिय तथा रमाईलो यात्रा हुनेछ भने भौतिक सम्पती तथा सवारीसाधन प्राप्तीको योग रहेको छ । व्यापार व्यवसायबाट प्रशस्त आम्दानी हुनेछ । मायाप्रेम तथा पति पत्नी बीचको सम्वन्धमा विश्वासको वातावरण मजभुत भएर जानेछ । पारिवारिक माहोलमा दिन वित्न तथा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुलाई पछी पारी आफु अगाडी बढ्ने समय रहेको छ । मंगलबारबाट समय मध्यम रहेकोले व्यस्तता बढेपनि स्वास्थ्यको ख्याल नगर्दा कमजोरी महसुस हुनेछ । खानपान तथा वाहिरी वातावरणको ध्यान दिनुहोला । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागी आजको दिन मध्यम रहेको छ । गोप्यता भङग हुने तथा आफन्तसँग विवाद बढ्नेछ । भौतिक सम्पती तथा सवारीसाधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
कर्कट ( ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो):- व्यापारमा उच्च प्रतिफल हात पार्न सकिनेछ भने व्यापारकै शिलशिलामा रमाईलो यात्रा गर्न सकिनेछ । प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जानेछ भने जीवनसाथिको सहयोग पाईनाले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । अध्ययनमा नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । अतिथिको रुममा सम्मान पाईनुको साथै रमाईलो घुमघामको समेत अवसर आउनेछ । राज्यको नजिक भई काम गर्नेहरुका लागी समय फलदायी रहनेछ भने पद प्राप्तीको योग रहेको छ । बिहीबार दिउसोबाट समय मध्यम रहेकोले खानपान तथा मौसमको ख्याल नगर्नाले स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । कार्यक्षेत्रमा आलोचना गर्नेहरु बढ्ने तथा काम बिग्रने भएले सताउनेछ । व्यापार व्यवसायमा मन्दी आउने तथा आम्दानी घट्नाले दैनिकी प्रभावित हुनेछ । पढाईलेखाईमा मन नजानाले नतिजा आफुतिर ल्याउन मुस्किल पर्नेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे):- समय राम्रो रहेकोले रमाईलो यात्रा गर्ने अवसर जुर्ने तथा यात्राका क्रममा साथिभाईका साथमा मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । साहशिलो काम गरेर लाभ लिन सकिनेछ । व्यापार व्यवसायमा समय दिन सके मनग्गे आम्दानी हुनेछ भने भौतिक सम्पती तथा धातु संग्रह गर्न सकिनेछ । अरुको सहयोग पाईने तथा आफन्तको बिश्वास जितेर काम गर्न सकिने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । विवाद,प्रतिस्पर्धामा तपाईको जित निश्चित रहेकोछ । मायाप्रेममा रमाउन चाहने जोडीहरुका लागी समय उत्रम रहेकोछ । सन्तान तथा परिवारका सदस्यबाट सहयोग पाईनेछ । अध्ययनमा ध्यान जादा बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो हुनेछ । प्रयन्न गरेका कामहरु सजिलै सम्पादन हुनेछन् । महंगो उपाहार तथा भौतिक सम्पती प्राप्त हुनेछ । अदालती निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा सम्पादन हुनेछन् ।
कन्या ( टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो ) :- बुधबारसम्मको समय मध्यम रहेकोले आफन्त तथा साथीभाईसँग राय नमिल्दा दैनिक कामहरु प्रभावित हुन सक्छन् । राजनीति तथा समाजसेवामा समय खर्चिनेहरुले काम गर्दा ध्यान दिनुहोला । निर्णय गर्न नसक्दा हातमा आईसहेको काम अरुले नै फुत्काउनेछन् । घरजग्गा तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला विवाद तथा किचलो हुनसक्छ । बिहीबारबाट समय राम्रो रहेकोले अध्ययन तथा खोजीमुलक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । शेयर बजार तथा व्यापारमा गरेका लगानी फस्टाएर जानेछ । नयाँ तथा रचनात्मक काम गरी आर्थिक अवस्था सुदृड पार्न सकिनेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने पुराना कामहरु सम्पादन हुनाले थप हौसला प्राप्त हुनेछ । सामाजिक काममा होमिनेहरुका लागी समयले साथ दिनेछ । अध्ययनमा सफलता प्राप्त हुनेछ भने उत्कृष्ट नतिजाले परिवारका सदस्य तथा गुरुहरु खुशि हुनेछन् ।
तुला ( रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते ) :- राम्रा तथा परिणामूखि काम हुनाले आफन्त तथा छिमेकीहरु प्रभावित हुनेछन् । पराक्रमी क्रियाकलापमा भाग लिई पुरुषार्थी काम गर्न सकिनेछ । लेख तथा रचनाको माध्यमबाट सस्कार परिवर्तन गर्न तपाईको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ । अध्ययनकै सवालमा यात्रा हुनेछ । भाग्यले साथ दिने हुनाले व्यापार फस्टाएर जानेछ । प्रेममा नजिक हुन सकिनेछ । मंगलबारबाट समय मध्यम रहेकोले राजनीति तथा सामाजिक काम गर्दा ध्यान दिनुहोला आलोचना गर्नेहरु सक्रिय हुनेछन् । बिरोधीहरुको सक्रियता बढ्ने हुँदा काम गर्दा ध्यान दिनुहोला । भौतिक सम्पती तथा सवारीसाधनको कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला अप्रिय घट्ना नहोला भन्न सकिन्न । अनाबश्यक टिका टिप्पणीमा समय व्यातित हुनेछ । आहार विहार नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । तापनी कृषि तथा पशुपालन व्यवसायबाट लाभ उठाउन सकिनेछ ।
बृश्चिक ( तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू ) :- पढाईलेखाईमा मन जाने हुनाले सफलता हात पार्न सकिनेछ । छोटो दुरिको आन्तरिक यात्राको तय गर्न सकिनेछ । दाजुभाईबाट सहयोग पाईने हुनाले आट तथा शाहस गरी लगानी बढाउन सकिनेछ । मायाप्रेममा नजिक हुने समय रहेको छ । सकारात्मक सोचको माध्यमबाट रुढिवाढी परम्परालाई चिरफार गर्न सकिनेछ । लेखनकलाको माध्यमबाट अन्धबिश्वासलाई चिर्दै समाज रुपान्तरण गर्नमा तपाईको सक्रि भूमिका रहनेछ । बिहीबार दिउसोबाट घरेलु समस्याले सताउने तथा आमाको स्वास्थ्यमा खरावी आउन सक्छ । आफन्त तथा आफ्नो भन्नेहरुले तपाईँको काममा बाधा तथा अवरोध गर्नेछन् । पढाईलेखाई सुस्त गतिमा अगाडी बढ्नेछ । कृषि,सहकारी तथा पशु चौपायाको व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । मायाप्रेममा आफ्नो मन मिल्ने मायालुलाई समय दिन नसक्दा सामान्य मनमुटाव सिर्जना हुँनेछ । राजनीतिकर्मिका लागी समय अन्यदिन भन्दा मध्यम रहेकोछ ।
धनु ( ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे ): – साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले खेलकुद तथा आट,शाहस तथा पराक्रमी क्रियाकलापमा भाग लिई नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ । अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन तपाईकै पक्षमा हुनेछ । लेखन,कला तथा साहित्यको क्षेत्र आजको दिन राम्रो रहेकोछ । प्रेम सम्बन्धहरुमा आत्मियता थप प्रगाड हुनेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने व्यापारकै शिलशिलामा छोटो दुरिको यात्रा हुनेछ । मंगलबार र बुधबारको समय मध्यम रहेकोले बोल्ने कुरामा ध्यान नजादा आलोचनाको शिकार होईनेछ । कार्यक्षेत्रमा कुरा काट्ने तथा खुट्टा तान्नेहरु सक्रिय हुनेछन् । खानपानमा ध्यान दिनुहोला समय मध्यम रहेकोछ । कुटुम्ब तथा आफन्तसँग घरायसी कुरामा राय बाजिनेछ । व्यापारमा मन्दी आउनेछ । प्रेममा अविस्वास सिर्जना हुनेछ । तरपनि गित संगितको क्षेत्रमा लाग्नेहरुका लागी समयले साथ दिनेछ ।
मकर ( भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) :- साताको सुरु र अन्तको समय मध्ययम रहेकोले दैनिक खर्च बढ्ने तथा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नजान्दा दिन प्रतिकुल बन्नेछ । आफन्त तथा अपरिचीत व्यक्तिको विस्वास गर्नाले धोका पाईनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउने तथा उपचार खर्च बढ्नेछ । तरपनि विदेशी सामानको व्यापार तथा विदेशी सस्थामा काम गर्नेहरुको लागी समय उत्तम रहेकोछ । अध्ययन तथा कामको लागी छोटो दुरिको यात्रा गर्न सकिनेछ । मंगलबारबाट बिहीबार बिहानसम्मको समय उत्तम रहेकोले समाजमा राम्रा काम गर्न सकिने हुँदा ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ । बन्द व्यापार फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक अवस्था सुदृड हुनेछ । प्रेममा एक अर्कालाई विश्वास गर्न सकिने मन प्रशन्न हुनेछ । नयाँ प्रबिधिको प्रयोग मार्फत आम्दानी बढाउन सकिनेछ । राजनीतिमा सबैलाई मिलाएर लान सकिने हुँदा पद प्राप्तीको योग रहेकोछ । परिवारका साथ रहेर मिठो मसिनो भोजन गर्ने अवसर जुर्नेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा ):- साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले सामाजिक तथा परोपकारी काममा समय व्यतित हुनेछ । सरकारी स्तरबाट हुने कामहरु समयमा सम्पादन हुने हुनाले नया काम गर्न जोस जागर आउनेछ । शिक्षाकै सवालमा लामो दुरीको यात्रा हुने प्रसस्त सम्भावना रहेकोछ । आफन्त तथा घर परिवारका सदस्यहरुका साथ धार्मिक यात्रामा निस्कन सकिनेछ । अध्ययन तथा खोजमुलक काममा मन जाने योग रहेकोछ । एकल तथा साझेदारी व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । मंगलबार र बुधबारको समय मध्यम रहेकोले आफन्त तथा साथी भाईबाट टाडिनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । धोका दिने तथा आषा देखाउनेहरु सक्रिय हुनेछन् । कार्यक्षेत्रमा आलोचना गर्नेहरुबाट सजक रहनुहोला । स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला औषधी उपचार खर्च बढ्नेछ । अध्ययनमा मन नजादा अरुभन्दा पछी परिनेछ । तरपनि लामो दुरिको यात्रा हुने तथा विदेशी सामानको व्यापार फस्टाएर जानेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची):- सुखद समाचारले आजको दीन उत्साहपुर्वक बित्नेछ । सहपाठी तथा प्रतिस्पर्धीहरुलाई उछिन्दै बिषेश अवसरमा सहभागी हुने अवसर जुर्नेछ भने मेहनेतले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो हुनेछ । रोकिएका काम बन्ने तथा नयाँ काम सुचारु गर्न सकिनेछ । पैत्रिक धन तथा सम्पतिको प्रयोग मार्फत आम्दानी बढाउन सकिनेछ । व्यापारमा दिगो आर्थिक लाभ हुने योजना शुभारम्भ गर्न सकिनेछ । प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जानेछ । बिहीबार दिउसोबाट समय मध्यम रहेकोले भौतिक तथा विलाशी वस्तुको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्यम रहेकोछ । ओभर कन्फिडेन्टले नतिजा शुन्य जस्तै हुनेछ । व्यापारमा नाफा कमाउन निकैनै समय खर्चनु पर्नेछ । पढाईलेखाईमा मनग्गे समय खर्चिएपनि न्युन सफलता हातलागी हुनेछ । खानपान तथा स्वास्थ्यमा ध्यान नदिए खर्च बढ्ने योग रहेकोछ । तपाईको साता दिन शुभ रहोस् ।
तपाईको २०७८ साल वैशाख महिनाको राशीफल ५ दिन पहिले
तपाईको २०७८ सालको बार्षिक राशीफल कस्ताे छ ? ५ दिन पहिले
तपाईको आजको राशिफल कस्तो छ ? ७ दिन पहिले
संसदकाे चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य ३ मिनेट पहिले
कर्णालीमा चैतेदशैँको सार्वजनिक बिदा ५ मिनेट पहिले
भन्सार एजेन्ट छनौटका लागि परीक्षा मिति सार्वजनिक ६ मिनेट पहिले
रात्रीकालिन व्यवसायमा रोक लगाउने मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय ६ मिनेट पहिले
अनलाइन कक्षाका लागि शहरमै राम्रो पूर्वाधार छैन १४ मिनेट पहिले
आईएलओको पैसामा एमाले भातृसंस्थाको मस्ती, को-को परे कारवाहीमा ? १७ मिनेट पहिले
मानसिक तनावलाई व्यवस्थापन गर्न योग गर्दै पर्यटन व्यवसायी १९ मिनेट पहिले
सिभिल बैंकको कामू सीईओमा पोखरेल नियुक्त १९ मिनेट पहिले
उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिँदै सकियो वासन्ती छठ २६ मिनेट पहिले
अझै खुल्न सकेनन् म्याग्दीका बन्द चिज उद्योग ३१ मिनेट पहिले
टीकापुरमा आगोले पोलिएका १७१ को निशुल्क शल्यक्रिया ३८ मिनेट पहिले
विद्यालय बन्द गर्ने लगायत सीसीएमसीका प्रस्तावहरू परिमार्जनसहित पारित ३९ मिनेट पहिले
२३ वर्षअघि सामूहिक लगानीमा किनेको डोजर कवाडी बन्दै ४६ मिनेट पहिले
आईपीएलः आज चेन्नई र राजस्थानको म्याच भिड्दै, यस्तो छ सम्भावित प्लेइङ–११ ५० मिनेट पहिले
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको २५ हजार कित्ता शेयर लिलामी भर्ने आज अन्तिम दिन १ घण्टा पहिले
गोर्खाली युद्धबन्दी लोकभाका र कथा प्रकाशित २१ घण्टा पहिले
अरुण भ्यालीको हकप्रद शेयर आजदेखि बिक्रीमा २ घण्टा पहिले
बढ्दो जोखिम कम गराउन प्रत्येक वडाले दुई जनासम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाउने ५ दिन पहिले
नेप्सेमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको मूल्य समायोजन ४ दिन पहिले
इच्छाकामनाको करिब साढे २०० घरधुरीमा बिजुली बले २ घण्टा पहिले
नेपाल महिला चेम्बरको अध्यक्षमा निरन्तरता पाउने श्रेष्ठ को हुन् ? १८ घण्टा पहिले
समर्थन फिर्ताको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाउँदै माओवादी केन्द्र २ हप्ता पहिले
कोरोना संक्रमण बढेपछि स्वास्थ्यकर्मीको बिदा बन्द ३ हप्ता पहिले
नबिल बैंक र नेपाल स्थानिय तयारी पोशाक उत्पादन संघबीच सम्झौता २ हप्ता पहिले
चिरञ्जिीवी पौड्याललाई पितृशोक ४ हप्ता पहिले
पर्यटनमा गति लिँदै गण्डकी प्रदेशको प्रवेशद्वार आँबुखैरेनी ३ हप्ता पहिले
बेरोजगार युवाको सहयोगी बन्दै सहारा सहकारी ३ दिन पहिले
खरिपाटीको क्वारेन्टाइन बन्यो २०० शैय्याको आइसोलेशन ८ महिना पहिले
मन्दिरको छानामा टायल लगाइँँदै ९ महिना पहिले
छोरीलाई जबर्जस्ती बलात्कार गर्ने बाबुलाई जन्मकैद ! १ वर्ष पहिले
भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको सङ्ख्या ६ लाख नाघ्यो १० महिना पहिले